Isku-xirka Twitter waa ari suuq-geyn oo hoos loo dhigo ganacsi kasta oo kasta waa inuu ahaadaa. Waxaa la caddeeyey in ay tahay istaraatiijiyad muhiim u ah in la dhiso kalsoonida، kor u qaadida wacyiga brandka، iyo in la xoojiyo xidhiidhka dadka dhagaystayaasha ah.
Haddii aad la yaaban tahay sida aad u bilaabi laheyd khadkaaga Twitter، halkan iyo halkan waa qa ka mid ah hage weyn oo la raaco.
WHSR waxay bilowday adeegeena ishtag ee ‘WHSRnetChat’، waxaanay gaarsiisaa kuwa bloggers، saameyeyaasha، shakhsiyaadka، sumcada، ururada، iwm. Si ay u ururiyaan ra’yigooda iyo jawaabcelinta mawduucyada la xiriira blogga.
2.1 1 هوت سويت
2.2 2. العازلة
2.4 قار كالي واكساي
2.7 3. كولانكان
2016 waxay sii wadaa inay noqoto sanad adag oo loogu talagalay warshadaha المدونات. Iyadoo la raacayo tilmaamaha cusub ee Google sida ugu wanaagsan ee loo raadin lahaa baaritaannada، bloggers ayaa la filayaa in ay shaqo adag ku qabtaan si ay u gaaraan heer sare.
Barta blogku waa in ay diirada saaraan bixinta maadooyin wanaagsan oo wax ku ool ah oo akhristayaasha. Ereyada Kale ، المدونون Ayaa Laga yaabaa inay u baahdaan inay sameeyaan cilmi baaris iyo qoraa dheer oo posts.
– Dayinbed (Daysinbed) Janaayo 10 ، 2016
– Angie Silver (SilverSpoonLDN) Janaayo 19 ، 2016
الجابيس آه oo جوجو آه. Anigu waxaan ahay 10 sano oo diiradda saaraya kobaca beeraha
– Fugogaraam iyo Muuqaal (fuggsandfoach) فبراير 7 ، 2016
Waxaan u maleynayaa in joogtayntu marwalba muhiim tahay. Anshax ahaan ، diiradda ، boostada & warbaahinta bulshada. # bloggingtips # sheygaaga #WHSRnetChat
– Waxaad Ilmahayga Hooyo (YouBabyMeMummy) Janaayo 10 ، 2016
– كريستينا نيكلسون (MediaMaven_CN) Janaayo 11 ، 2016
Tone wuxuu ka soo baxayaa bogagga wuxuuna kugu xirayaa akhristayaasha. Markaad u dhowdahay inaad dhagaystayaashaada ku dhageysato، waxa fiican inaad fahamsan thay waxa ay raadinayaan iyo waa hab lagu fili karo si aad u korto blogkaaga، sidoo kale!
Sidookale، ahaada Ha isku dayin inaad qof kale ku daydo. Adeegso codkaaga oo samee qaabkaaga.
– Nolosha Qoyska oo ka weyn (largerfamily) Janaayo 15، 2016
Dhawan، JerryWebHostingJerry، ayuu qoray boostada martida ee Problogger si uu kaaga caawiyo inaad sii wadato hawlaha التدوين. Iska hubi kuwan 5 xeeladaha blogging wuxuu ku qeexayaa 2016.
هالكان واكسا كو يال قدوبو ظور آه:
U firfircoon shabakadaha bulshada si aad wax uga uga qabtaan dhagaystayaashaada
Maqaalka la xiriira: Sidee wjiga ujeedadu u socoto 2016
Waa inaad akhrido maqaalada، sameyso cilmi baaris qotodheer، qorsheyso joornaalkaaga blogka، kobcinta bartaada، iwm. Jadwalkaaga waa la buuxiyaa! صدى ثورة ، واكاد يو بهان طائي قلب كا كاوية انعاد شمع كا قباطو ، جعار اان سي عاد يو ماموشو وارباهينتا بولشادا.
oomphe bulsho ee تويتر
– Waxaad Ilmahayga Hooyo (YouBabyMeMummy) 23 Maarso 2016
مهلا! Xaqiiqdii waa furfurnaan من Buffer ، Tweet Jukebox + Dabiiciga bulshada ؟؟؟ [bufferSproutSocialalphabetsuccess] #WHSRnetChat ???
– سام هيرلي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (Sam___Hurley) 30 مارسو 2016
– إليان سميث (Ileane) ٢٤ مارسو ٢٠١٦
– Ku-xirida Mummey (AttachmentMumma) 19 Maarso 2016
Dad badan ayaa jira، Buffer، Hootsuite iwm
– هارلينا سينغ (harleenas) Maarso 28، 2016
Sida aad arki karto، inta badan ka qgbgaleyaasheena waxay kugula talinayaan Buffer، Hootsuite iyo Socialoomph inay yihiin qalab ay u adeegsadaan maareynta warbaahinta bulshada.
Hootsuite iyo Buffer waxay yihiin labada qalab ee warbaahinta bulshada ee ugu ugans cansan bulshada dhexdeeda. Waxaad arki kartaa inta hartay.
Haddii aad u baahatid xoogaa hacks dhaqso ah، waa tan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato marka aad isticmaaleyso.
1 هوت سويت
قار كالي واكساي
hiya، Waxaan u isticmaalaa Social Oomph iyo Tweetdeck laakiin aalad uma adeegsano Facebook.
– فيكي تشارلز (SingleMAhoy) 7 Maarso 2016
Waxaan jeclahay Buffer ، Just إعادة تغريد iyo Manageflitter. (Kaliya waxaan isticmaalaa agabyada maamulka ee Twitter) #WHSRnetchat #warbaahinta bulshada
– جاسبر (OpportunityTM) 28 Maarso 2016
ردًا علىCrowdfire ma fiicna inaad kormeerto soo socda?
– ستيفاني باكلي (eatleepchic_ie) 25 مارسو 2016
Wixii تويتر: TweetDeck + "Dhibaato ama raac" dhammaantood waxaan u baahanahay.
– Adrian Jock (IMTipsNews) 2 أبريل 2016
Waxaan kula talinHootsuite iyocommun_it
– Nancy Seeger (SeegerN) آبريل ٣ ، ٢٠١٦
Shabakad internetka oo awood leh oo kugu caawisa inaad ku koro khadkaaga Twitter iyo Instagram. Laga soo bilaabo website-ka، waxaad arki kartaa cidda ku hawlaneyd koontadaada. Waxa kale oo ay kaa caawineysaa inaad hesho dadka isticmaala munaasabadaha soo socda.
Waa qalab aad u maareyn kartida Twitter si kor loogu qaado ka qaybgalka iyo abuurista raadoyinka imaan kara. Waxaad la socon kartaa dhammaan isdhexgalkaaga muhiimka ah ee beeshaada gudaheeda. Waxa ugu fiicani waa، waxaad sameyn kartaa oo kobcin kartaa ololeyaal kala dwan sida jadwalkaaga gaarka ah.
ويا سحلان طائي في لا إسلام مالو. Kaliya cusbooneysii cusbooneysiintaada maktabada oo samee jadwalka boostada. Edger wuxuu isticmaali doonaa cusbooneysiinta maktabada si uu u abuuro saf. Qaybta ugu fiican waa، waxay "آليًا" u buuxin doontaa oo buuxin doontaa lafteeda iyo cusbooneysiinnadaada ma aha inay qashinayaan.
Iyada oo ku xiran tahay niche، waxaad u maleyn kartaa in shabakadaha aan caadi ahayn in ay gaaraan dhagaystayaashaada.
Ka dhigashada lacagta laga helo blogga has iyo jeer waa mawduucda ugu qatarsan internetka. Marka aad eegto isbedelka raadinta Google، waa mid ka mid ah ereyada ugu caansan ee waqtiga oo dhan.
Maxay taasi kuu sheegaysaa؟ Sida iska cad dadka waxay raadinayaan jawaabo dhab ah.
Bishii Janaayo 2016، Pat Flynn oo ka socota Dakhliga Dakhliga Gaarka ah $ 106،492.27. Waxa uu samaynayaa (ku dhawaad) sida ugu yar ee shirkadda yar ee shirkadda liiska.
Laakiin، meesha iyo waxa la bilaabayo?
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasheena، habka ugu wanaagsan ee looga helo lacagta blogga waa iibinta shirkadda.
Si: # 1 Guryaha Shirkadda tooska ah، # 2 Heshiisyada Heshiiska La Wadaago # 3 التابعة لـ Amazon ، # 4 Adsense / Media.net.
– براين جاكسون (brianleejackson) ١٣ أبريل ، ٢٠١٦
– Angel Balichowski (Angelcbali) ١٨ أبريل ٢٠١٦
u jeedi dhagaystayaasha iyo baahiyahooda، waxay bixiyaan xal xallilan (sida: sida loo kordhiyo dhibcaha dhibcaha) ka dibna ku dhex soco
– زاك جونسون (zacjohnson) ١٧ أبريل ٢٠١٦
قار كا ميد آه أيا لاجا يابا إيني إيستكماالان بودكا سيدي كالاب شمع سو ساركا سي كور لوجو قادو إيبنتا ألابادا أما أديجيادا.
– ستيفاني كليج (StephanieFrasco) 14 أبريل 2016
Isticmaal bartaada sida qalab suuq ah oo soo jiidanaya si aad u soo jiidatid runta، bixiya macaamiisha adeegyada caadiga ah، ee soo noqnoqda.
– برنت جونز (brentjonline) ١٣ أبريل ٢٠١٦
Gael Breton oo ka socda Hay’adda Hacker ayaa falanqeeyay sida bloggers ay lacag uga helaan barta iyo waxay la yimaadeen qaybaha waaweyn ee 3 halkaasoo lacagta ay ka timaaddo (oo u muuqata mid u muuqata mid u muuqata mid u muuqata mid sahlan).
المصدر: Maamulka Hacker
Dad badan oo المدونين آه ayaa lacag badan ku sameeya internetka. Waa la qaban karaa.
Maqaalka la xiriira: Sida loo sameeyo (lacago badan) lacag blog ah: fikrado niche، daraasad kiis، iyo istaraatiijiyada taraafikada
Waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad na siiso fikradahaaga ku saabsan su’aasha ku xigta ee bogga Twitter-ka. Nagala soo xiriir #WHSRnetChat si aad ula ula wadaagto khibradaada ama waydiiso su’aalahaaga.
Kahor intaanan dhammeyn xilkeyga، ku amaan kuwa na siiyay jawaab-celin. Aynu isku xirnoWHSRnet
sherisaid ،rozkwalker ،michelotta ، @ 30ishblogging ،cucumbertown ، @ cre8d ، @ mousefashion95 ،KintsugiOfLife ،aannadobreva ،SalmaDinani ،kevvieguy ، @ DeepaliBhatt4 ،theresCoremhr ، ، @ thejfoster42 ،HoylesFitness ، @ ImRose1 ،ElleAyEsse ،MikeSMcDonald ،WebpresenceUK ،INNOVEXco ،B_Grimaldi ،shyvish ،mzoptimism ،UwanaWhat ،ikuciawazjan ،MinommaEresseFr ، bloghandsseo